WARBIXIN: Bixitaanka Ciidamada AMISOM Ee Soomaaliya…Talaabo Waqtigeeda Ka Soo Hormartay – Kismaayo24 News Agency
WARBIXIN: Bixitaanka Ciidamada AMISOM Ee Soomaaliya…Talaabo Waqtigeeda Ka Soo Hormartay
by Tifaftiraha K24 2nd March 2017 057
Dhaarinta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi “Farmaajo” todobaadkii la soo dhaafay waxay wadooyinka magaalada Muqdisho kala kulantay mowjado rajo ah oo muujinayey in uu dhashay waabari cusub oo xasilooni ku soo dabaali kara wadanka.
“AMISOM kaligeed ma jabin karto Al-Shabaab” ayaa lagu yiri warbixin sanadkii la soo dhaafay uu baahiyey machadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage. “Tani waxay dhici kartaa haddii AMISOM ay garab iyo wada shaqeyn ka hesho ciidamo Soomaali oo awoodleh” ayaa lagu yiri warbixinta.
Laakiin “ciidamada qaranka Soomaaliya” ayaa ah ciidan uu hareeyey dhibaatooyin badan oo uu ka mid yahay musuq-maasuqa, tabardarada iyo in aanan laga jecleen meelaha ka baxsan caasimada.
Francisco Madeira oo ah wakiilka gaarka ah ee midowga Africa u qaabilsan arimaha Soomaaliya ayaa Wakaaladda wararka ee IRIN u sheegay in ay ka warhayaan taxadiyaatkaas hortaagan dhismaha ciidanka Soomaaliya. “Dhisida awoodda ciidamada Soomaaliya waa mid udub dhexaad u ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, waxaana arintaas ku bixineynaa awoodeena tan ugu wanaagsan” ayuu yiri.
“Bixitaan ciidamada AMISOM ay baxaan sanadka 2020-ka wuxuu noqon doonaa mid waqtigiisa ka soo hormaray” ayuu yiri: Christian Ani Ndubuisi oo ah baaxith ka tirsan machadka daraasaadka amniga.
Ciidamada ugu xoogan ee AMISOM waxay ka soo jeedaan wadamada Uganda, Ethiopia, Kenya iyo Burundi. Mushaarka iyo dhaqaalaha ciidankan waxaa bixiya midowga Yurub, taageerada Logistic-da ahna waxaa bixiya Qaramada Midoobey.
laakiin ilaa hadda ma helin diyaarado Helicopters ah oo ay aad ugu baahan yihiin, dhowrjeerna dalbadeen.
Marka midowga Africa uu ku calaacalayo in askartooda ay ku dhiigbaxayaan Soomaaliya, Reergalbeedkuna uu bixinayo lacag oo kaliya, waxaa midowga Yurub ay iyagana isku difaacayaan
“Waxaa jira howlgalo kale oo nabad ilaalin ah oo ka jira Qaarada oo u baahan taageero sida Afrikada dhexe, Mali iyo Chad.
“AMISOM waxay sanadkan u dabaal degi doontaa sanadkeedii tobnaad. Midowga Yurub oo ah Maalgeliyaha ugu weyn ee duulaanka Soomaaliya-na ma hayo wax natiijo ah, mana arko iftiinka Kanaalkii la qodayey tobankii sano ee la soo dhaafay” sidaas waxaa yiri Thierry Vircoulon oo ah Agaasimaha Bartamaha Africa ee hay’adda ICG
“Midowga Yurub hadda diyaar uma ahan in uu maalgeliyo howlgal kale oo nabad ilaalin oo aan dhamaad lahayn sida UN-ka oo kale” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Laakiin midowga Africa weli wuxuu ku baaqayaa ciidamo dheeraad ah si loo wiiqo Al-Shabaab ka hor inta aanan la gaarin sanadka 2018-ka xilligaas oo ay sheegeen in ay bilaabi doonaan qorshaha bixitaanka.
16-kii bishii January waxay golaha amaanka ee QM ka dalbadeen in la ansixiyo 4,500 oo askari oo dheeraad ah.
“Waan soo afjarnay qorshaha lagu soo celinayo meelihii ugu muhiimsanaa ee ay Al-Shabaab ka joogtay Soomaaliya gaar ahaan Jubada hoose sidaas darteed si howshan loo qabto waxaan u baahanahay ciidamo dheeraad ah oo nala qaban doona howshan muddo lix bilood oo kaliya, ka dibna aan ciidanka ku soo celino cadadkii uu ahaa” ayuu yiri Madeira oo ah wakiilka midowga Africa ee Soomaaliya.
Update: Qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowlada federaalka oo maraayay deegaanka….
DEG DEG: Ciidamo hubeysan oo goordhaw la wareegay xaafaddo kamid ah magaalada beledweyne
Dhageyso: Xildhibaan Jeesow oo Ka Hor Yimid Guddigii Uu Magacaabay.
XOG: Shirkii lagu dhexdhexaadinayay Madaxweynayaasha Jubaland iyo koonfur Galbeed oo wali la isku mari la’yahay.
admin 9th January 2016 9th January 2016
War Cusub: Dhageyso Warar dheeraad ah oo laga helaayo Shil gaari oo Maanta ka dhacay deegaanada Puntland
Tifaftiraha K24 16th June 2016